High Speed Door - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka High Speed Door)
Akpaka Agbanwe Agbanwe Agbanwe Agbanwe Agbanwe Okporo ụzọ dị elu na-emetụta ọnụ ụzọ mpụga na n'ime ụlọ ọrụ, dịka nri, ọgwụ, kọmputa, ụgbọala, ngwa ngwa na igwe. Ụdị a nwere ezi nkwụsi ike na okpomọkụ mkpuchi. Okporo ụzọ dị elu dị elu, ọsọ ọsọ, nzọpụta ọkụ, gburugburu ebe obibi, nkwụsị nke ájá, nkwụsị nke ahụhụ,...
Ntughari Onwe-gi: Emere PVC siri ike, na -eme ala dị ala dị arọ. Azụ nke ákwà mgbochi ahụ na-ebugharị ezé na-aga n'ihu na mgbe ahụ na-agagharị ma gbadaa n'ime onwe-lubricating uzo polyethylene nke ejiri aka n'osisi nke galvanized. Ọmụmụ ihe Nkwakọ ngwaahịa
Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị elu maka ụlọ ọrụ
Ihe Nlereanya.: HF-001
Ọnụ ụzọ dị elu bụ ụzọ ụlọ, nke a na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ha bụ nkwalite teknụzụ nke oghere ndị a maara n'ozuzu, ọnụ ụzọ PVC ma ọ bụ ndị na-ekpuchi windo. Ihe kachasị dị iche bụ na nrụrụ na-adịgide adịgide na-enye ọsọ ọsọ ka elu ma na-enwe ike ịdado ọnụ ọgụgụ dị elu nke usoro mgbagwoju anya...
Ọnụ ọsọ a na-eme ngwa ngwa na-eme ka njirimara mara mma nke na-anabata ihe ndị ọkachamara sayensị, dịka ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ na-arụ na ọkwa kachasị ọcha. Site na ọnụ ụzọ dị ngwa maka ebe ndị a pụrụ iche Ị nwere ike nweta ngwaahịa mara mma na ụlọ ọrụ mmepụta ebe Ị ga-enweta usoro kachasị elu nke ịdị ọcha. Nkọwa Size...
nchikota akuku azụ azụ ụzọ pvc
nchikota akuku azụ azụ ụzọ pvc Mgbe ọnuma ahụ na-aga n'ihu na nkwụsịtụ, megharịa mpempe akwụkwọ na-eme ka ihe ọkpụkpụ na-emepụta, bụ nke na-emeghị ka ọ bụrụ akwụkwọ ntughari ma ọ bụ ntinye aka na ya bụ ike mbido mbụ iji belata oge ịchekwa ego. Kedu ihe bụ nkọwa nke ọnụ ụzọ anyị dị elu? Technology Category:...
Nnukwu Ụlọ Ọrụ Na-arụ Ọrụ Dị Oké Ọnụ Ahịa High Speed ​​Industrial High Rapid Rolling Doorcan bụ maka ihe oriri kemịl textile electronic electronics refrigeration logistics, warehousing na ebe ndị ọzọ. Nnukwu ọsọ ngwongwo ọnụ ụzọ na- echebe anyị pụọ na nhụsianya, zọpụta ike ma nyere anyị aka ịhapụ ọrụ maka ezigbo...
High Speed Door Pvc High Speed Door High Speed Door Motor Spiral High Speed Door Aluminum High Speed Door OCM High Speed ​​Door Pvc High Speed ​​Doors Spire High Speed ​​Door